PSALIM 21 Midika hoe andininy amin'ny andalana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka SALAMO 21 midika hoe andininy isaky ny andiany
Androany isika dia handalina ny Salamo faha-21 izay midika hoe andalana. Ny fifandraisan'ny Salamo faha-21 miaraka amin'ny Salamo teo aloha dia miharihary amin'ny alàlan'ny fampitahana (andininy 2 sy 20: 4). Ahitana ny Salamo fisaorana noho ny fanafahana ny Tompo (andininy 1-7, ny fahatokiana ny fandresen'ny mpanjaka amin'ny alàlan'ny olom-peheziny (andininy 8-12), ary ny vavaka farany (andininy 13). Andininy 1-13: Ny ampahany voalohany (ao amin'ny Salamo 21 ), dia fisaorana ho an'ny fandresena; ny tapany farany dia fiandrasana fahombiazana amin'ny Tompo amin'ny alàlan'ny mpanjaka-jeneraly. Ny fizarana roa amin'ny fandresena dia manome toe-javatra hidera sy vavaka ho an'ny lehiben'ny komandn'i Israely.
Salamo 21 Ny dikan'ny hoe Andininy
Andininy 1: «Ny mpanjaka hifaly amin'ny herinao, Jehovah ô; ary amin'ny famonjenao no hataony firavoravoana;
Be dia be ny antony nalain'i Davida Mpanjaka fifaliana ao amin'ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Angamba io fifaliana io dia avy amin'ny fiarovana sy fahombiazana amin'ny ady na fanafahana hafa. The fihetseham-po ny fanokafana ity salamo ity dia feno fitiavana. ? Ny horakoraky ny Metodista voalohany tao anatin'ny fientanam-pifaliana dia mbola mamela heloka bebe kokoa noho ny fahatsentsenantsika. Ny fahasambarantsika dia tokony hanana endrika maneho hevitra ao anatiny.
Andininy 2: Nomenao azy ny irin'ny fony, ary ny tenin'ny molony tsy nolavinao. Selah. "
Ny hery sy ny famonjen'Andriamanitra dia tonga tamin'i Davida ho valin'ny fanirian'ny fony sy ny vavaka nataony (ny fangatahan'ny molony). Ity dia miresaka amin'ny toerana manokana namaly ny vavaka manana eo amin'ny fiainan'ny mpino. Tokony ho fantatry ny kristiana rehetra ny valin'ny valiny matetika sy mahafinaritra amin'ny vavaka. Rehefa tsy mankafy ny fahazoana ny valin'ny valiny ny kristiana, dia satria tsy mivavaka izy, dia mivavaka tsy izy, na misy sakana amin'ny fivavahana. Betsaka ny zavatra mety manakana ny vavaka eo amin'ny fiainan'ny mpino, zavatra iray manakana azy tsy hiteny amin'i David, "Efa nanome azy ny fanirian'ny fony ianao, ary tsy niaro ny fangatahan'ny molony.
Andininy 3: Fa nosakananao ny fitahian'ny soa izy; satroboninahitra volamena tsara no teo an-dohany;
Hitan'ny Mpanjaka David fa ny hatsaran-toetra Andriamanitra dia tonga hitsena azy. Nentin'Andriamanitra tany aminy izany, mihoatra noho i David nanenjika ireo fitahian'ny fahatsarana ireo. Marina fa tsy nisy isalasalana fa nandeha teo alohan'i David Andriamanitra tamina fitahiana, ary neken'i Davida sy nidera azy noho izany izy. Tsy izany anefa matetika toa toy izany nandritra ny taona maro lasa teo anelanelan'ny nanosorana azy ho mpanjaka, fony izy mbola tanora ary fony izy nandray ny seza fiandrianan'ny Isiraely tamin'ny farany. Nanao ny satro-boninahitry ny fanjakan'ny Isiraely i David ?? Firenena manokana Andriamanitra ?? ary ny mpanjaka mandresy. Ny toetran'ny volamena madio dia mampiseho ny maha-manokana ny firenena sy ny fandresena.
Andininy 4: Nangataka fiainana taminao izy, dia nomenao azy, dia halavan'ny andro mandrakizay mandrakizay.
Niady i David mba hivavaka mba hitehirizan'Andriamanitra ny ainy, sy ny fomba nankalazany ny valin'io vavaka io. Tamin'ny loza mety hitranga amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'ny fifandonana dia nomena fiainana sy andro lava i David.
Verse 5: Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao; voninahitra sy fahalehibiazana no nataonao taminy.
Fantatr'i Davida ny fisandratana tonga tamin'ny mpanjaka sy ny mpandresy tamin'ny ady; fa eto kosa dia nambarany fa io voninahitra, io voninahitra, io fiandrianana nankafiziny io dia avy tamin'Andriamanitra fa tsy avy aminy irery.
Andininy 6: Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy; ampifalinao indrindra amin'ny tavanao izy.
Nanambara i David fa voatahy indrindra indrindra mandrakizay izy, saingy ny fanatrehan'Andriamanitra Tenany no fitahiany sy fifaliany lehibe indrindra. David dia faly kokoa tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra noho ny satro-boninahitry ny fanjakana na ny fandresena.
Andininy 7: Fa ny mpanjaka matoky an'i Jehovah, ary noho ny famindrampon'ny Avo Indrindra dia tsy hangozohozo izy.
Davida dia nanambara ny fitokisany tamin'ny famindram-po an ’Andriamanitra ary hitohy hiaro sy hitahy azy any aoriana izy. Ny tsirairay amin'ireo zavatra ireo dia tsy isalasalana fa marina tamin'i Davida Mpanjaka, fa izy ireo koa na mety ho marina kokoa noho ny Zanak'i Davida lehibe kokoa, dia ny Mesia, Jesosy Kristy, ilay Zanak'i Davida.
Andininy 8: Ny tananao hahay hahita ny fahavalonao rehetra; ny tananao ankavanana hahita ny mankahala anao.
Fantatr'i David fa na dia nandresy tamin'ny ady aza izy dia tsy nisy ny fikatsahana sy ny fitsarana azy Andriamanitra fahavalo. Ny Fahavanan'Andriamanitra (Jesosy Kristy) dia nandresy ny fahavalony sy ny fahavalontsika. Nandresy ny ota teo amin'ny hazo fijaliana Izy ary nandresy ny fahafatesana rehefa nitsangana tamin'ny fasana Izy. Mety hieritreritra isika fa ny fahavalontsika dia ny olona izay mandefa fotoan-tsarotra manodidina antsika, fa izy ireo dia eo ambany fifehezan'i Satana. Resy teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy Kristy Tompontsika
Andininy 9 sy 10: Hataonao tahaka ny fatana mirehitra izy amin'ny andro fahatezeranao; Jehovah handany azy amin'ny fahatezerany, ary handevona azy ny afo. Ny voany dia haringanao tsy ho amin'ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin'ny zanak'olombelona.
Ny fitenenana, ny fotoana fahatezeranao, ?? mampahatsiahy antsika fa tahaka ny ankehitriny ny fotoan'ny fahasoavany, dia hisy fotoana voatondro ho an'ny fahatezerany. Misy andro famaliana an'Andriamanitsika; Aoka ireo izay manamavo ny andro fahasoavana hahatsiaro izao andro fahatezerana izao. Nanambara tamim-pahatokiana i Davida fa hatoky ny fahavalony Andriamanitra, ary nasehony fa ny fahatokisana amin'ny teny mahery indrindra na dia Andriamanitra aza no hanapa-kevitra ny taranaky ireo manohitra azy. Ny voany eto ny dikan'ny taranany rehetra, tahaka ny vokatry ny fisasarany.
Andininy 11: Fa nikasa hamely anao izy ireo; namoron-kevi-dratsy izy ireo, izay tsy vitany.
Ireo fanambarana mafy ny fitsarana ao amin'ny Salamo 21: 8-10 dia toa mitaky fanazavana. Nahoana no sazy henjana toy izany? Satria ninia nikomy tamin'Andriamanitra sy ny olony izy ireo, na dia manan-danja kokoa noho ny fahaizany manao azy aza ny tetik'izy ireo (noheverin'izy ireo ny fitaovana diso izay tsy vitan'izy ireo atao). Ny faharatsiana dia misy otrikaretina ao anatiny izay tsy hita amin'ny fahotan'ny tsy fahalalana; Ankehitriny, rehefa manenjika ny filazantsaran'i Kristy ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra, ny helok'izy ireo dia tsara tokoa ny helony ary mitovy ny sazin'izy ireo.
Andininy 12: Ary ampivereninao izy, raha manamboatra ny zana-tsipìkanao amin'ny kofinao manoloana ny tavany ianao;
Hitan'i David ary angamba hitany ara-bakiteny ny fahavalon'Andriamanitra nandositra teo amin'ny sehatry ny ady, ary nitodika nanohitra ny tafik'Andriamanitra nandeha. Ary ny zana-tsipìkanao ho entinao manatrika ny tavany; Hitany ny fahavalon'Andriamanitra ho tsy afa-manoatra teo alohan'ireo zana-tsipìka vonona sy ny tsipika fikomian'ny ady, mitsara an'Andriamanitra. Ny zana-tsipìkany dia kendreny hanatrika azy ireo. ?? Ny fitsaran'Andriamanitra dia antsoina hoe zana-tsipiny, ?? maranitra, mailaka, azo antoka ary mahafaty.
Andininy 13: Misandrata amin'ny herinao, Jehovah ô; hihira sy hidera ny herinao izahay;
Nivavaka tamin'Andriamanitra mivantana teto i Davida. Nanandratra an'i Jehovah izay nanana izany hery be izany tao aminy Izy, ary tsy mila miantehitra amin'ny hafa intsony amin'ny heriny. ??Asandrato ny tenanao, ry Tompo ny zavaboarinao tsy afaka manandratra anao. Hihira sy hidera ny herinao izahay Taorian'ny fanambarana mivantana ny fiderana, dia naneho ny fahatapahan-kevitra hataon'izy sy ny vahoakan'Andriamanitra izy hanohy manome voninahitra an’Andriamanitra sy hanao izany amin ’ny hira. Mifarana amin'ny feon'izy ireo mandritra ny feo manontolo ity salamo ity. Feno ny fiderana an'Andriamanitra noho ny fitahian'ny fandresena, ny fanafahana, ary ny valiny ny valiny. Io fihetsika io dia tokony ho eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra foana.
Rahoviana no Ilaintsika io Salamo faha-21 io?
Rehefa sorena isika ary mahatsiaro ho malemy taloha.
Rehefa mahatsapa isika fa tsy mandresy amin'ny fiainana ary misy ny faharesena isam-baravarana.
Rehefa toa ity tontolo iainantsika ity dia feno faharatsiana ary tsy afaka mahita ny tsara fotsiny isika.
Tompo ô, faly aho fa nomenao hery aho rehefa niantehitra tamin'ny heriko, ary tsy nisy vokany izany rehetra izany.
Misandrata amin'ny herinao, ry Tompo, raha mitady hamono ny aiko ny fahavalo, dia nitsangana teo anilako ianao ka nanome ahy fandresena. Haleloia
Mivavaka aminao aho ry Tompo mba hanomezanao hery bebe kokoa sy manjaka bebe kokoa amin'ny fahavaloko
Mangataka aminao aho, Tompo ô, hanome anao fahasoavana bebe kokoa aho mba hijoro mafy kokoa amin'ny finoako sy hivavaka aminao mandritra ny androm-piainako.
Previous lahatsoratraPSAALANA 18 FIVORIANA NATAON'I VERSE
Next lahatsoratraSalamo100 midika hoe andininy tsirairay
6 Ny vavaka Manam-pahefana dia manondro ny fanasitranana sy fanafahana
Toeram-bavaka ho an'ny fifandraisana masina
Teboka vavaka hanoherana ny fanodinkodinana ratsy amin'ny fiangonana